सृष्टि श्रेष्ठ बन्लिन् अपवाद ?, पर्खाइमा ‘रोमियो एण्ड मुना’ « Ramailo छ
सृष्टि श्रेष्ठ बन्लिन् अपवाद ?, पर्खाइमा ‘रोमियो एण्ड मुना’
सन् २०१२ की मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठले अनमोल केसीको जोडी भएर ‘गाजलु’ फिल्म खेलिन् । ‘गाजलु’ चल्यो । सृष्टिको अभिनयको पनि तारिफ भयो । नव नायिकाका रुपमा त्यो वर्ष आयोजना भएका सबै जसो अवार्डमा सृष्टिको वर्चश्व रह्यो।
दुई वर्ष पछि सृष्टि पुनः ठुलो पर्दामा फर्किएकी छन्, फिल्म ‘रोमियो एण्ड मुना’ मार्फत । यो फिल्ममा सृष्टि मुना र नायक विनय श्रेष्ठ रोमियो बनेका छन् । नरेश कुमार केसीले निर्माण गरेको फिल्म कस्तो होला त ? यही शुक्रबार, साउन ११ गतेदेखि फिल्म लाग्दैछ । पक्का पनि प्रतिक्षा भैरहेको छ ।
मिस नेपालका लागि नेपाली फिल्म क्षेत्र त्यति फलिफाप भैरहेको छैन । धेरै जसो मिस नेपालले त फिचर फिल्ममा डेव्यु नै गरेका छैनन् । डेव्य मिस नेपालले पनि फिल्ममा जादु देखाउन नसकिरहेको तितो यर्थाथ छ । कोही अभिनय त कोही फिल्मको व्यापारिक हिसाबले असफल सावित भएका छन् ।
सौन्दर्य र अभिनय दुवै अब्बल मानिएकी मिस नेपाल (सन् १९९७) झरना बज्रचार्यले पनि फिल्म क्षेत्रलाई लिड गर्न असमर्थ भइन् । आमा भएपछि पनि आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय माल्भिका सुब्बाले खेलेको फिल्म ‘गुड बाई काठमाण्डू’ निर्माण भएको लामो समय भैसक्दा पनि सार्वजनिक प्रदर्शन भएको छैन । त्यसैले पनि होला माल्भिकाले फिल्म खेल्न त्यति रुची देखाएको देखिंदैन ।
मिस नेपाल मलिना जोशीले करिब आधा दर्जन फिल्ममा अभिनय गरिन् । तर मलिना अभिनित कुनै पनि फिल्म व्यापारिक सफल भएनन् । यसैले मलिना यतिबेला पर्ख र हेरको अवस्थामा छिन् । गत सालकी मिस नेपाल निकिता चन्दकले अभिनय गरेको फिल्म ‘रानी महल’को छायाँकन नै रोकिएको छ । यस वर्षकी मिस नेपाल श्रृङखला खतिवडाले फिल्ममा पाइला राख्लिन् या नराख्लिन् ? केही वर्ष पर्खनु पर्नेछ । सृष्टि र विनयसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
पहिलो फिल्मबाट वाही वाही कमाएकी सृष्टिको फिल्मी करिअर चाहिं कस्तो होला त ? शिर्ष भूमिका निभाएको ‘रोमियो एण्ड मुना’ले सृष्टिको अगामी फिल्मी करिअर पक्कै पनि तय गर्नेछ । दोश्रो फिल्मबाट सफलता पाएर सृष्टि असफल मिस नेपालमाझ अपवाद बन्लिन् त ?